Puntland oo ku dhawaaqday in Villa Somaliya aysan shir uga qeyb galaynin, shirkana uu ka dhaco Garoonka diyaaradaha Muqdisho.. | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Puntland oo ku dhawaaqday in Villa Somaliya aysan shir uga qeyb galaynin,...
War-saxaafadeed ka soo baxay maamulka Puntland ayaa walaac looga muujiyey carqaladeyn ay sheegeen in madaxweyne Farmaajo uu ku hayo dadaallada lagu xalinayo caqabadaha ku hor gudban qabsoomidda doorashooyinka dalka.
Qoraalkan ka soo baxaya madaxtooyada Puntland ayaa lagu yiri,
“Dowladda Puntland ee Soomaaliyeed waxay walaac ka muujinaysaa in Madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu markasta soo saarayo qoraalo, qaadayana tillaabooyin carqaladeynaya dadaalada xalka loogu raadinayo caqabadaha hor taagan geeddi socodka qabsoomidda doorashada Barlamaanka iyo Madaxweynaha ee Dowladda Federaalka Soomaaliya.”
“Dowladda Puntland waxay cadeynaysaa inay markasta diyaar u tahay ka qaybgalka shirarka xalka loogu raadinayo qabsoomidda doorasho heshiis lagu yahay oo ku qotonta heshiiskii 17 September 2020,” ayaa lagu yiri biyaankaan ka soo baxay madaxtooyada maamulka Puntland.
Sidoo kale Ugu dambeyntii waxaa lagu yiri qoraalka maamulkaas, “Dowladda Puntland waxay soo jeedinaysaa in shirarku ka dhacaan Garoonka diyaaradaha Magaalada Mogadishu, waxayna ka filaysaa Xafiiska Qaramada Midowbay iyo AMISOM inay diyaariyaan goobta iyo amniga shirarka. Dowladda Puntland waxay Wakiilada Beesha Caalamka uga mahad celinaysaa dadaalada joogtada ah ee ay la garab taagan yihiin Dowladda iyo Shacabka Soomaaliya.”
Previous articleMadaxweynihii hore Xasan skekh oo mar kale eeda dalka iyo doorasho la’aanta dusha u saaray farmaajo..
Next articleMadaxweyne Joe Biden oo sheegay in dhamaadka bisha May la heli doono, tallaal ku filan dhammaan dadka cudurka COVID-19.
Magaalada Auckland ee dalka New Zealand oo loo aqoonsaday magaalada...
Magaalada Auckland ee dalka New Zealand ayaa loo aqoonsaday magaalada ugu nolosha wanaagsan caalamka, qiimeynta sanadle ah xilli uu caalamka halakeeyay cudurka safmarka ee...
Cali Badal Muxumed “ Dowlad Deegaanka Itoobiya uu mar walba...